Trump oo Askartiisa ka saaraya Soomaaliya & Madaxweyne
Sida ay daabacday Barta ka falanqoota Ganacsiga ee Bloomberg, Hogaamiyaha Mareykanka Donald Trump ayaa qorsheynaya in uu Sooomaaliya ka saaro Askarta iyo saraakiisha ka joogta ee taageerada siiya Ciidanka DFS & AMISOM.
Tiro rasmi ah lagama soo gudbin inta ay gaarsiisan yihiin Ciidankaan Mareykanka ee Soomaaliya jooga, balse waxaa lagu qiyaasaya in ay ku dhaw yihiin kun, waxaana ay isugu jiraan Askar kooban & Saraakiil u badan la-taliyaal sare.
Trump ayaa la kulmay mas’uuliyiinta waaxda Difaaca mareykanka, la taliyaha amniga Qaranka iyo saraakiil kale oo howshaan wax ka diyaarin kara, maadaama soo jeedintiisa ay salka ku heyso bixitaanka Askarta Ameerikaan ah ee jooga Soomaaliya.
Warbixin isla Bloomberg ka diyaariyay ka xog gaarista askarta Mareykanka iyo taliska AFRICOM ee fuliya weerarada cirka ah waxa uu kasoo xigtay taliskaas in tallaabadaan ay fursad u tahay Al-Shabaab, maadaama ciidanka cadaadinaya la saarayo.
Geesta kale, Bartaan ka falanqoota Ganacsiga ayaa sheegtay in ay la hadashay Hogaamiyaha DFS Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si ay wax ugu weydiiso aragtida Soomaaliya ee la xiriirta bixitaanka Ciidamadaan Mareykanka.
Hogaamiyaha Soomaaliya ayaa sheegay in uusan dooneyn bixitaanka Ciidamada kooban ee Mareykanka ka jooga Soomaaliya, sabab la xiriira in ay ku howlan yihiin la dagaalanka Al-Shabaab.
Mareykanka Ciidamada ka jooga Soomaaliya waxa ay intooda badan ku sugan yihiin Gobolka Shabeelaha Hoose oo ay saldhig ku leeyihiin garoonka diyaaradaha ee Ciidankii cirka Soomaaliya ee Ballidoogle.
Waxaa caawiya taliska AFRICOM oo inta badan weerarada duqeynta ah ka fuliya koofurta, Bartamaha iyo deegaannada DG Puntland ka fuliya duqeynta ka dhanka ah Al-Shabaab & Daacish.
Isha: Bloomberg / Axadle
Alpha Condé mobilizes in its stronghold of Higher Guinea